Madaxweyne Ahmed Madoobe oo weerar Afkaa ku qaaday Farmaajo | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Ahmed Madoobe oo weerar Afkaa ku qaaday Farmaajo
Madaxweyne Ahmed Madoobe oo weerar Afkaa ku qaaday Farmaajo
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo goordhaw shir jaraa’id ku qabtay magaalada Dhuusomareeb ayaa ka hadlay fashilka ku yimid shirkii wadatashiga ee u socday iyo cida sababteeda laheyd.
Axmed Madoobe ayaa fashilka shirka dusha ka saaray Dowlada federaalka gaar ahaan Madaxweyne Farmaajo uu sheegay in Dowladnimada kala weenaatay in uu ku dhego hal gobol iyo hal degmo uu sheegay in beeshiisa degto.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa shaki galiyay cida dalka maamuleysay mudo afar sano ah , waxa uuna tilmaamay in Farmaajo uusan sidan dalka ku maali karin una qalmin Madaxweyne Soomaaliyeed.
Waxa uu sheegay Madaxweynaha Jubbaland in uu diyaar u yahay wax walbo oo xal lagu heli karo, waxa uuna nasiib daro ku tilmaamay dagaalka dowlada ka wado gobolka Gedo uu sheegay in dhibaato badan ka jirto.
Hadalka Madaxweynaha Jubbaland ayaa kusoo aadaya xili uu fashilmay laguna kala tagay shirkii Wadatashiga ee magaalada Dhuusomareeb uga socday Dowlada federaalka iyo madaxda maamul
Previous articleXildhibaan Mahad Salaad Habaar qabe lafu sirmay
Next articleMadaxweyne Ahmed Madoobe maxoow ki tilmaamay Farmaajo
Madaxweynaha maanta xilka ka degaya ee dalka Mareykanka Donald Trump oo...